မတ်မတ်သင်ဇာရဲ. အကြမ်းစားပုံများ… – Shan Ma Lay
July 24, 2021 aung aungLeaveaComment on မတ်မတ်သင်ဇာရဲ. အကြမ်းစားပုံများ…
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ အနုပညာ လောက မှာ ထိပ်တန်း မင်းသမီး စာရင်း ဝင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမကို အားပေး ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ် တွေကလည်း အများ အပြား ရှိပါတယ်နော်။သင်ဇာက အနုပညာ အလုပ်တွေကိုလည်း အများ အပြားလုပ် ကိုင်နေရပြီး ခရီးတွေ ထွက်ကာလည်း ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူး နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာ့ရဲ့အောင်မြင်မှု ပုံရိပ်ကတော့ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ပိုပို တိုးလာပြီး နေရာ တစ်နေရာကနေ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။သင်ဇာက စိတ်ထား လေးလည်း ဖြူစင်ပြီး သဘော ကောင်းသူလေး ဖြစ်လို့ လူချစ် လူခင်ကလည်း ပေါများပါတယ်နော်။
စကားပြော တာလေးကအစ ချိုသာပြီး အမြဲပျော်ပျော် နေတတ်သူလေး ဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေက သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အလှအပကိုလည်း အထူး ဂရုစိုက် တာကြောင့် သင်ဇာကတော့ အမြဲတမ်းခေါင်း အစခြေ အဆုံး လှပနုပျို နေတာကို ပရိသတ်ကြီးလည်းတွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
အခုဆိုရင်တော့ သင်ဇာက ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ ဝတ်စုံလေး ကို ဝတ်ဆင်ပြီး ညှို့အားပြင်းတဲ့ အလှအပတွေနဲ့ ပိုစ့်လေး တွေပေးကာ ကြော်ငြာ ရိုက်ကူး နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။သင်ဇာကတော့ အချိန်တိုင်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပြီး မြင်သူတကာ ငေးမောရ လောက်ပါတယ်နော်။
သင်ဇာ့ရဲ့အလှအပ တွေကတော့ အမြဲတမ်း မြင်နေရလည်း မရိုးသွားဘဲ အမြဲတမ်း အံ့ဩမှင်သက် သွားအောင် လုပ်ဆောင် နိုင်တာကြောင့် သူမရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် လေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါရစေနော်။
July 29, 2021 July 29, 2021 aung aung